Nahoana no tsy afa-mandresy ireo antoko mpanohitra ao Japan? · Global Voices teny Malagasy
Heverin'ny mpanara-baovao fa toekarena matanjaka ihany no mahaliana ny Japoney
Voadika ny 09 Novambra 2021 5:26 GMT
“Fanantenana avo kokoa amin'ny hatsaram-piainana. Miasa miaraka hamahana ny hoavy.” Afisim-pifidianan'ny Antoko Komonista Japan taona 2019. Sary avy amin'i Nevin Thompson. Lisansan-tsary: CC BY 3.0
Na dia mitolona mafy aza ny governemanta, tsy misy fiovany ny karama, ary nirongatra ny tranga COVID-19 nandritra ny andro mafana, dia mbola nisitraka fandresena mafy orina ihany ireo miara-dia ao amin'ny fitondrana an'i Japan amin'izao fotoana izao, teo amin'ny fahefana hatramin'ny septambra 2012, tamin'ny fifidianana ankapobeny tao amin'ny firenena tamin'ny 31 oktobra. Mbola tsy nety nahazo vato betsaka avy amin'ny mpifidy ihany ireo antoko mpanohitra, na dia nisy aza ireo ezaka handrindrana ny asam-panentanana nataon-dry zareo.
Mahatratra 465 ny isan'ny toerana mila rombahina ao amin'ny Lapan'ny Solontena (House of Representatives), antenimiera efitra ambany ao amin'ny Parlemanta roa loha an'i Japan, antsoina hoe Diet Nasionaly. Nihoatra ny toerana 233 ilaina hanapahana ny firenena ny azon'ny Antoko Demaokratika Liberaly (LDP) mitondra amin'izao fotoana izao, fa nahazo 261. Nahazo toerana 32 fanampiny ny antoko Komeito, mpiara-dia aminy ara-politika hatramin'ny ela, izay ahafahan'ny mpiara-dia mitondra amin'izao fotoana izao manana ny maro an'isa tsara toerana.
Tsy nahavita nihoatra ny azony taloha ny Antoko Demaokratika ara-Dalampanorenana (CDP), izay vao niorina tamin'ny fifidianana ankapobeny taona 2017 monja—nefa mbola antoko mpanohitra lehibe indrindra raha eo amin'ny isan'ny toerana azo mialoha ny latsabaton'ny 31 Oktobra. Na dia niasa niaraka tamin'ireo antoko politika hafa aza ry zareo mba tsy hifaninana amin'ny fandrombahana seza iray, dia toerana 96 ihany no azon'ny CDP. Mbola namotsotra toerana koa aza ny mpiaradia aminy voalohany tamin'ny fifidianana, ny Antoko Komonista Japan (JCP), ka nahatonga ireo mpanaraka ny fifidianana hihevitra fa vao maika aza namely tena ny fanapahan-kevitra tsy nampifaninana kandidà tany amin'ny fari-pifidianana sasany.
Nandinika ny mponina iray ao Tokyo, Derek Wesseman, izay niasa ho mpanampy ny parlemantera iray ao amin'ny Diet-n'i Japan, fa tsy manana fifandraisana isa-paritra eny an-kianja amin'ny mpifidy ny CDP, izay tsy itoviany amin'ireo mpiara-dia aminy amin'ny fifidianana na amin'reo mpifaninana aminy ara-politika aza—saingy noho ny fiezahana tsy hampizarazara ny vato, dia tsy nifaninana taminy tamin'ireo mety ho nahazoany toerana ny JCP, izay manana mpanohana matanjaka eny an-kianja.
Vehivavy 45 monja, mbola latsaka roa noho ny fifidianana teo aloha aza, no voafidy tamin'ity taona 2021 ity, mbola latsaky ny 10 isanjaton'ny toerana 465 ao amin'ny rihana ambany ao amin'ny lapan'i Japan.
Rehefa antomotra ny fifidianana dia nisy ny mpanara-baovao politika nilaza mialoha fa ho akaiky kokoa noho ny mahazatra ny vokatra. Rehefa nosoloina an'i Fumio Kishida ny praiminisitra Suga Yoshihide tsy tiam-bahoaka tamin'ny voalohandohan'ny volana oktobra, toy ny lasa kely hery ny fiaraha-mitantana nizotra nankany amin'ny fifidianana, niezaka mafy hanangom-bato eo anatrehan'ny fanoherana nihavelom-bolo indray.
Nifofotra nisarika ny mpifidy tamin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny valan'aretina COVID-19, namela ny mpivady handray anaran-samihafa, nankatoa ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana, ary mamelona indray ny toe-karena mifotetaka sy ambany karama ireo antoko mpanohitra lehibe.
Na izany aza, nanolo-kevitra ny mpandinika sasany fa ny toekarena matanjaka ihany no tena itodihan'ny mpifidy Japoney, izay nanorenan'ny fiaraha-mitantana ankehitriny ny fanentanam-pifidianany. Misy porofo fa ny fitantanana ara-toekarena fa tsy ny olana ara-tsosialy toy ny fitoviana eo amin'ny fanambadiana no nanakoako tamin'ireo mpifidy tanora kokoa, izay nirona hifidy ny Antoko Liberaly Demaokratika am-perinasa.
Nanondro ny fitsapan-kevitra nivoaka tamin'ny andron'ny fifidianana i Nojo Momoko, mpikatroka mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fifidianana eo amin'ny tanora ao Japana, mampiseho hoe inona ny lohahevitra manan-danja amin'ireo mpifidy amin'ny sokajin-taona samihafa:
Ny isanjaton'ireo namaly izay mametraka ny laharam-pahamehana indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy dia 8,3% ho an'ny adolantsento, 6,5% ho an'ny 20 taona, 2,5% ho an'ny 30 taona, 1,5% ho an'ny 40 taona, ary 0,6% ho an'ny olona 70 taona no ho miakatra.
Raha naneho hevitra momba ny siokan'i Nojo, nanolotra ny heviny ny bilaogera Hikosaemon fa nifanehatra amin'ny toe-tsaina efa lalim-paka ao amin'ny fiarahamonina Japoney ireo antoko mpanohitra ao Japana, manao fanentanana amin'ny sehatra liam-pandrosoana ara-tsosialy izay ahitana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny fitoviana amin'ny fanambadiana:
Ity ny marina mampalahelo – mora ny manome tsiny ny laharana gisigisitra misy an'i Japan amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ao Japana tsy idiran'ny LDP, fa ny marina dia tsy dia misy liana loatra amin'izany ny sokajin-taona rehetra na lahy na vavy, indrindra fa ireo mpifidy zokiolona. Ny olana izany amin'ny farany dia ara-piaraha-monina
Ary hanoritana ny tahotra heverina ho fandrahonana ataon'ny antoko mpanohitra tafaray amin'ny governemanta, nisy ireo politisiana nanandrana ny tetika “tahotra mena“, mampitandrina amin'ny fiavian'ny faharavana raha toa ka hiditra ao amin'ny governemanta ny Antoko Komonista Japoney.
Niara-niasa ireo antoko mpanohitra afovoany havia tena fantatra, nandritra ny fanentanam-pifidianana. Ohatra, nanao fanentanana tamin'ny anaran'i Ikeuchi Saori, kandidà JCP sady mpikatroka LGTBQ+ izay nikatsaka ny ifidianana azy indray tao amin'ny distrikan'i Tokyo i Yamamoto Taro, filohan'ny antoko mpanohitra kely Reiwa Shinsengumi:
— Tokyo12HAUS🏡池内さおり事務所（公式）🌈 (@saorijimusyo) October 29, 2021
Fidio Ikeuchi Saori!
Hafatra avy amin'i Yamamoto Taro ao amin'ny Reiwa Shinsengumi:
Fidio ity kandidà ity ary mandefasa hafatry ny fahasamihafana! Aoka ho kevoka amin'ny fandefasana kandida tahaka izao ho any amin'ny Diet izay hiady mafy ho anao! Andao ampiana izy ho lany!
Na dia teo aza ny fanampian'i Yamamoto tamin'ny fanentanana sy ny fisandratan'ny antoko mpanohitra, dia tsy voafidy indray i Ikeuchi. Raha ny marina, very toerana roa ny antokony, ary tsy nahavita ihany koa ny CDP, mpiara-miombon'antoka tamin'ny fanentanana—tsy mahagaga angamba raha 55,79 isanjato ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy.
Nisy ny fanakianana fa, noho ny fampihenana ny isan'ny toerana fandatsaham-bato tao anatin'ny roapolo taona, dia lasa sarotra kokoa ny mandrotsa-bato ao Japana. Hatramin'ny taona 2000, nihena 7.000 ny isan'ny toeram-pifidianana manerana ny firenena, mihena 13 isanjato. Ny hafa kosa milaza fa mora kokoa amin'ny ankapobeny ny fahazarana amin'ny fifidianana.
Mety ho nampisaritaka ny mpifidy ihany koa, samy mampiasa fanafohezana anarana mitovy amin'ny teny japoney ny Antoko Demaokratika ara-Dalàmpanorenana sy ny Antoko Demaokratika mpifaninana aminy—saingy ny antony mahatonga ny antoko mpanohitra ao Japana toa tsy afaka mandresy amin'ny fifidianana dia mety misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny fialana an-daharana sy ny fisaratsarahana niainan-dry zareo nandritra ny efa-taona farany.